Umsebenzi odibeneyo kunye neMbali yesizwe
Xa kuziwa kwimbali yoononopasho, yonke into iqala ngokuveliswa komshini wokunyathelisa uhlobo olushenxiswa nguJohannes Gutenberg ngekhulu le-15. Nangona kunjalo, ngelixa iiBhayibhile kunye nezinye iincwadi zaziphakathi kwezinto zokuqala eziveliswa ngumshicileli weG Gutenberg, bekude kube ngekhulu le-17 ukupapashwa kwamaphephandaba eYurophu.
Iphepha lokuqala elipapashwe rhoqo liphuma kabili ngeveki eNgilani, njengoko kwenza yokuqala yemihla ngemihla, i -Daily Courant.
Umsebenzi omtsha kwiSizwe esiLawulayo
EMelika, imbali yeendaba zengxelo engenakulinganiswa kunye nembali yelizwe ngokwayo. Iphephandaba lokuqala kumakholoni aseMerika - i-Benjamin Harris ye- Publick Occurrences ebini i-Foreighn kunye ne-Domestick- yapapashwa ngo-1690 kodwa yavalwa ngokukhawuleza ngenxa yokungabi nelayisenisi efunekayo.
Okuthakazelisayo, iphephandaba likaHarris laqesha iqela lokuqala lokufunda inxaxheba. Eli phepha lanyatheliswa ngamaphepha amathathu okupapashwa kwamaphepha kunye nephepha lesine lashiywa lingenanto ukuze abafundi badibanise iindaba zabo, baze badlulisele komnye umntu.
Amaphephancwadi amaninzi ngelo xesha ayengenjongo okanye angathathi hlangothi ngetoni njengamaphepha esiwaziyo namhlanje. Kunoko, babenempapasho enobungqina obunobungqina obunobungqina obuchasene nobutshaba baseburhulumenteni baseBrithani, nto leyo eyona nto eyona nto yayingcono ukuyidiliza.
Ngo-1735, uPeter Zenger , umshicileli weNew York Weekly Journal, wabanjwa waza wavalelwa ngenxa yokunyathelisa izinto ezinobungqina ngoRhulumente waseBrithani.
Kodwa igqwetha lakhe, uAndrew Hamilton, lathi iingqungquthela ezikulo mbuzo zingenakuqhayisa ngenxa yokuba zisekelwe eqinisweni.
UZenger wafunyaniswa unetyala, kwaye ityala libekwe umzekelo ukuba isitatimende, nokuba sichaphazelekayo, asikwazi ukuba sisinyanzelo ukuba kuyinyaniso . Icala elingummiselo lisize ukuseka isiseko somshishini we- free kwilizwe elitsha.
Kwakukho amaqela amaphephancwadi angamakhulu amaninzi e-US ngo-1800, kwaye loo nombolo yayiza kukhula ngokugqithiseleyo njengoko inkulungwane yayigqoke. Ekuqaleni, amaphepha ayesabelana kakhulu, kodwa ngokuthe kancinci baba ngamazwi kuphela abavakalisi babo.
Amaphephancwadi ayekhulayo njengeshishini. Ngowe-1833 uBenjamin Benjamin wavula iNew York Sun waza wadala i- " Penny Press ". Amaphepha amancinci e-Day, azaliswe ngumxholo onomdla ojoliswe kubameli beklasi abasebenzayo, babetha kakhulu. Ngenxa yokwanda okukhulu kwendlela yokuhambisa kunye nokushicilela okukhudlwana ukuhlangabezana neemfuno, amaphephandaba abe yimiba eninzi.
Eli xesha liye labona ukusekwa kwamaphephandaba ahloniphekileyo aqala ukubandakanya iintlobo zemigangatho yemicimbi esiyaziyo namhlanje. Enye iphepha elinjalo, laqala ngo-1851 nguGeorge Jones noHenry Raymond, benza iphuzu lokubonisa ingxelo kunye nokubhala. Igama lephepha? I-New York Daily Times , eyayiba yiNew York Times kamva.
Ixesha leMfazwe yoLuntu lazisa intuthuko yobuchwephesha njengeefoto kwiimviwo ezinkulu zesizwe. Kwaye ukufika kwe-telegraph kwenza i-War War Civil correspondents to transmit stories back to offices of their home offices with speed.
Kodwa imigca ye-telegraph yayisoloko ihla, ngoko abatyeleli bafunda ukubeka ulwazi olubalulekileyo kumabali abo emigqeni embalwa yokuhambisa. Oku kwakhokelela ekuphuhlisweni kwendlela yokubhala ebomileyo, engaphenduliweyo esiyibonisayo namaphephandaba namhlanje.
Eli xesha liye labona ukwakheka kwenkonzo yecingo ye -Associated Press , eyaqala njengentsebenziswano phakathi kwamaphephandaba ambalwa afuna ukwabelana ngeendaba ezafika nge-telegraph evela eYurophu. Namhlanje i-AP yindawo enkulu kunazo zonke zehlabathi kwaye enye yee-arhente ezinkulu zeendaba.
I-Hearst, iPulitzer & Yellow Journalism
I-1890 yabona ukunyuka kokupapasha abazalwana bakaWilliam Randolph Hearst noJoseph Pulitzer . Zomibini iimpapasho eziseNew York nakwezinye iindawo, kwaye bobabini basebenzise uhlobo oluthile lololo lwenzululwazi olwenzelwe ukukhanga abafundi abaninzi ngangokunokwenzeka.
Igama elithi " ubume bendabuko " imihla ukusuka kulo xesha; livela kwigama lomqhobo - "i-Yellow Kid" -papashwe ngu-Pulitzer.
Amaphephancwadi atyhutyha phakathi kwekhulu lama-20 kodwa nge-radiyo, umabonwakude kunye ne-Intanethi, ukupapashwa kwephephandaba kwanyuka kodwa kuncipha.
Ngekhulu lama-21 iphephandaba lephephandaba liye lahlangabezana nokuchithwa, ukuphazamiseka kunye nokuvalwa kweencwadi ezithile.
Sekunjalo, nangeminyaka engama- 24/7 kwiindaba zekhompyutha kunye namawaka ewebhusayithi, amaphephandaba agcina isimo sabo njengowona mthombo ongcono kakhulu weendaba eziphambili kunye nophando.
Ixabiso le-journalism journalism mhlawumbi libonakaliswe ngokugqithisileyo kwe- Watergate , apho ababhali bezindaba, uBob Woodward noCarl Bernstein, benza uchungechunge lwamanqaku okuphanda malunga nokukhwabanisa kunye nezenzo ezintle kwiNixon White House. Amabali abo, kunye kunye nokwenziwe ngenye impapasho, yabangela ukuba uMongameli u-Nixon asule phantsi.
Ixesha elizayo lokushicilelwa kwenkcubeko njenge-shishini lihlala lingacacile. Kwi-intanethi, iblologi malunga neziganeko zangoku sele zixhaphake kakhulu, kodwa abagxeki bathi ininzi ibhulogi igcwele ukuhleka neengcamango, kungekhona ukubika kwangempela.
Kukho iinjongo ezithembekileyo kwi-intanethi. Ezinye iiwebhusayithi zibuyela kwi-journalism yamandulo, njenge-VoiceofSanDiego.org, ebonisa ingxelo yokuphenya, kunye ne-GlobalPost.com , ejolise kwiindaba zangaphandle.
Kodwa ngelixa umgangatho wokupapashwa kweendaba uhlala uphakamileyo, kuyacaca ukuba amaphephandaba njengamashishini kufuneka afumane imodeli yoshishino elitsha ukuze aphile kakuhle kwikhulu lama-21.
Funda isiJalimane ngokuphulaphula i-Deutsche Schlager (i-German Hit Songs)
Iinkcukacha ezinzima zeCold: Izibalo ngokusetyenziswa kakubi kwezesondo zabantwana
Ukulungiswa kwangaphambili kwiTennis
Inkcazo kunye noMzekelo weMatriki yokuTshintshiselwa kweMarkov
Indlu engenaMlilo eyenziwe nguFrank Lloyd Wright
2006 I-Jeep Liberty Limited 4X4 CRD
Konke Ngo Batman
Imifuno - IsiGrazil Isigama
IiNkqubo eziPhambili zokuBhala iiNkqubo zokuBhala kwabaFundi beZikolo eziPhakamileyo